Umzi mveliso we-Astm-China abavelisi be-Astm, abaxhasi
Ubungakanani bemilinganiselo yokulinganisa i-ASTM (1 mg-100 g) imilo yoxinano
Zonke iintsimbi zenziwe ngentsimbi ye-premium yentsimbi ukubenza banganyangeki.
Ubunzima beMonobloc benzelwe ngokukodwa uzinzo lwexesha elide, kunye nobunzima obunendawo yokulungelelanisa ukubonelela ngexabiso elifanelekileyo lemali.
Ipolishi Electrolytic kuqinisekisa imiphezulu ecwebezelayo iziphumo anti adhesion.
Ubunzima be-ASTM 1 kg -5kg iiseti zinikezelwa ngomtsalane, ngokuzinzileyo, ngomgangatho ophezulu, kwibhokisi yealuminium enelungelo elilodwa lomenzi kunye ne-polyethylene foam ekhuselayo kwaye
Ubunzima be-ASTM ubume be-cylindrical buhlengahlengisiwe ukuhlangabezana neklasi 0, iklasi 1, iklasi 2, iklasi 3, iklasi 4, iklasi 5, iklasi 6, iklasi 7.
Ibhokisi yeAluminiyam eyilelwe ngendlela ebalaseleyo yokukhusela kunye neebumpers apho ubunzima ziya kukhuselwa ngendlela eqinileyo.
Ibha / Isandla se-CAST-IRON M1 ubunzima be-100kg ukuya kwi-1000 kg
Zonke iintsimbi zethu zeCast Iron Calibration Weights ziyahambelana nemigaqo ebekwe nguMbutho waMazwe ngaMazwe weZomthetho weMetrology kunye nemilinganiselo ye-ASTM yeCandelo M1 ukuya kwi-M3 ubunzima be-cast.
Xa kufuneka isiqinisekiso esizimeleyo sinokubonelelwa phantsi kwako nakuphi na ukuqinisekiswa.
Ubunzima beBhari okanye bokuThintelwa kwesandla kubonelelwa kugqityiwe kumgangatho ophakamileyo weMat Black Etch Primer kwaye ulungelelaniswe kwiindlela ezahlukeneyo zokunyamezelana onokuzijonga kwitshathi yethu.
Ukulinganiswa kwesandla kubonelelwa kugqityiwe kumgangatho ophakamileyo weMat Black Etch Primer kunye neer r
Ubungakanani bokulinganiswa kwe-ASTM (1 mg-200 g) imilo yesilinda
Umsebenzi onzima we-CAST-IRON M1 ubunzima be-500kg ukuya kwi-5000 kg (uhlobo lwe-Crane)
Ubungakanani bemilinganiselo yokulinganisa i-ASTM (1 mg-500 g) imilo yoxinano
Ubunzima be-CAST-IRON M1 ubunzima be-5kg ukuya kwi-50 kg (ukulungisa umngxuma kwicala)
Ubungakanani bemilinganiselo yokulinganisa i-ASTM (1 mg-500 mg) imilo yephepha
Ubunzima be-CAST-IRON E1 ubunzima be-100kg ukuya kwi-5000 kg (uxande)
Iseti yokulinganisa yokulinganisa kwe-ASTM (1 mg-500 mg) imilo yocingo
Ubunzima be-CAST-IRON M1 ubunzima be-500kg ukuya kwi-5000 kg (imilo yoxande)
Ubunzima be-ASTM yovavanyo lomntu ngamnye kwi-1g ukuya kwi-50kg yemilo yesilinda ngombhobho ophezulu wokulungisa
I-ASTM eyodwa / kabini iimvavanyo zokulinganisa ubunzima 1g-20kg
Isikali sokulinganisa sokulinganisa, Ubunzima bokulinganiswa kwamaNqanaba amaDigital, UkuLungiswa koBunzima beSeti, UkuLungiswa kweMisa, Ishedi ye-Shear Bead Cell, Ubunzima obuqinisekisiweyo,